WAAYIHII WARSAME Q35AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q35AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q35AAD
Warsame waxaa la geeyay xarun dadka la tarxiilayo lagu hayo oo ku taal garoonka diyaaradaha agtiisa waxaana loo sheegay in berri subaxdii la tarxiili doono. Warsame habeenkii oo dhan waxa uu la hadlay Idil waxa uuna ugu niyadqaboojiyay in aysan welwel waayo waxa uu ku yiri waan soo noqonayaa maalmo kooban kadib. Sidoo kale waxa uu la hadlay Faaiso oo u ballanqaadday in garabtaagnaan doonto ilaa iyo inta uu qoyskiisa dib ugu soo noqonayo.
Subixii dambe aroortii Warsame waxaa lagu qaaday baabuur ay leeyihiin Boliiska Kenya waxaana la geeyay magaalada Libooye ee xuduudka ku taal kadib na waxa uu uga sii gudbay Dhoobley.
Warsame markii uu Dhoobley tagay Faaiso ayaa lacag u soo dirtay. Waxa uu na galay qabanqaabo uu dib Nairobi ugu noqonayo. Balse Idil ayaa ka codsatay in muddo meeshiisa sii joogo uusan deg deg u soo noqon. Idil waxa ay Warsame ka dhaadhicisay in uu sugo inta ay cageheeda dib isaga taagayso maadaama ay toban bilood shaqadeeda ka maqnayd waxa ay sheegtay in ay shaqadii dib ugu noqonayso kadib na guri kiraysanayso dabadeedna ay ka shaqanayso sidii uu Kenya si sharci ah ugu soo gali lahaa maadaama ay dhici karto haddii uu hadda soo laabto in la dacweeyo oo haddana la xiro oo la tarxiilo. Warsame waa uu oggolaaday talada Idil.
Idil waxa ay suuqa ay gaysay dahab ay lahayd iyo mid kale oo walaasheed ka yari lahayd oo ay ka amaahatay, lacag dhawr kun oo doolar ah ayayna isku duwatay. Idil waxa go,aansatay in Nairobi iyo Afrika oo dhanba ka huleesho oo Yurub u dalaabto. Waxa ka niyadjabtay arxandarrada aabbeheed kula dhaqmay iyo in uu ilaa hadda diidan yahay in uu aqbalo guurka Idil iyo Warsame. Idil waxa ay go’aansatay in ay tahriibto oo ilaa Liibiya safar dhulka ku tagto kadib na xeebaha Liibiya. Idil u ma aysan sheegin Warsame safarka ay isku diyaarisay ilaa saacadihii ugu dambeeyaay waayo Idil waxa ay ka cabsanaysay in Warsame ka diido.
Goor galab ah salaaddii casir kadib ayay Idil, Warsame wacday u na sheegtay in ay tahriibayso berri foogna ay baabuur Suudaan u raacayso. Warsame aad buu uga argagaxay hadalka Idil u sheegtay waxa uu na isku dayay in uu ku qanciyo in aysan tahriibin asaga oo ku sababaynaya kow, in Guuleed uu aad u yar yahay aysanna habboonayn in Idil ka tagtago wiilkeeda oo sidaas u da’ yar. Labo, in safarka tahriibku yahay mid khatar badan oo ay nafteeda ku wayn karto. Si kasta oo Warsame isugu dayay in uu Idil safarka ka baajiyo waa uu ku guuldarraystay.
Warsame waxa uu Idil ku sagootiyaay heestii TAAR ee Al Fannaan Lafoole..
Dumarkaba adun baa iigu dhagnuglaayoo
Aad u soo dhaweeyee
Waxaad tahay dhakhtaraddii
Durba iga dawaysoo
Waad ii dhiirragalisee
Haddii aad dhaqaaqdoo
In aad dhoofto jeceshahay
Ku sidaa ma dheelliyo
U ma seexda dhinacoo
Mid hooda leh ha kaa dhigo.
Adaa dheemman iyo luul
Iyo dhagaxa dahabkaa
Qiimiga wax dheeroo,
Adigaa dhool aroor da’ay
Dhul xareedi waran tahay
Uga dhigan naftaydee,
Hadduu taarku soo dhacay
Dhawaan soo bax kugu yiri
Dharaar qura adduunyada
Hanti aad ku dhaqantiyo
Ha ka waayin dharagoo,
Idil waxa subax aroortii ayay Nairobi baabuur ka raacday. Hooyadeed, Caasho waxa ay u sheegtay in ay Mombasa safar oo shqada ku saabsan ku tagayso hal maalin kadib na ay soo noqon doonto. Idil maalmo kadib waxa ay gaartay caasimadda Suudaan ee Khartuum. Saddex maalin dabadeed na Idil waxa gurada u fariisatay gaari Cabdibile ah oo toddobaatan qofood sidii kiishash raashin ah loogu raseeyay, ayna wadaan Suudanays naxariisdaran. Waxa uu ahaa safar naxariisdaran oo dhibaato adduun kulansaday. Ciriirka baabuurka, oonka iyo haraadka iyo kulaylka qorraxda saxaraha Afrika waxa uu ahaa mid Idil aysan maskaxdeedu horay u qiyaasi karin hadde se meel ay ka noqoto ma joogto. Labo asbuuc oo rafaad ah kadib baabuurkii waxa uu dadkii ku daadiyay meel xudduudka Liibiya u jirta konton kiilo mitir. Markii baabuurkii daadiyay Idil iyo dadkii kale lugtooda ayay maaleen ayaga dabartoodu aad u yartahay oo oon iyo gaajo isigu darsameen. Labo maalin oo lugaynayeen dadkii inyar oo Idil ku jirto ayay gaaray magaalo yar oo ku taal xudduudka Liibiya intii kale waxa ay noqdeen waxa dhintay iyo wax ayaga oo naf yari ku jirto laga tagay. Markii magaaladii tageen waxaa qabqabtay Boliiska Liibiya kuna xareeyay guri wasaq badan oo mugdi ah.
Idil intii ay gurigaas Liibiyaanku ku haysteen waxa la kulantau wax walba oo foolxumo ah, kufsi, jirdil iyo hanjabaad in la dili doono haddii aysan lacag kumannaan doolar ah bixin. Ugu dambayn Idil markii ay Magafayaashii siisay lavag saddex kun oo doolar ah waa la sii daayay waxaana gaari loo saaray Tiribuli, caasimadda Liibiya.
Idil markii ay Tiribuli tagtay waxa ay la xiriirtay dallaaliinta tahriibayaasha doomaha saara waxa ay na soo bokimatay doon Yurub u qaadda. Idil markii ay raaci lahayd soo hubsatay ayay hooyadeed wacday u na sheegtay in ay Liibiya joogto dooontii ay raaci lahayd ay diyaar tahay. Maamo Caasho in badan bay ku dadaashay in ay Idil doonta ka baajiso kuma se guulaysan. Sidoo kale Idil waxa ay wacday Warsame u na sheegtay in doontii diyaar yahay oo ay caawa saqda dhexe shiraacanayso. Warsame waxa aan duco ahayn u ma awoodo, waxa uu na Alle uga tuugay in uu nabadgalyo ku geeyo Yurub.
Idil habeen saqdhexe ayay dooni yar oo aad u tayo liidata ka raacday xeebaha dalka Liibiya.
Markii ay doontii dhaqaaqday ayay Idil farriin qoraal ah Warsame waxa ayna tiri, “Baby doontii ayaan fuulay hadda ayay dhaqaaqday, 14 saac kadib ayaan Talyaaniga tagaynaa haddii Eebbe idmo. Markaan tago ayaan kula soo xiriirayaa haddii aanan tagin oo aan maro halkii kumaan dhallinyaro Afrikaan ahi hortay mareen ii soo ducee in uu Rabbi ii naxariisto ogowna in aaad hooyo iyo aabbe u tahay Guuleed. Macsalaama macaane.”
Habeenkii Idil doonida ka raacday xeebaha Liibiya galabteedi dambe waxa u fadhiyaa bannaanka guriga cariishka ah ee uu Dhoobley ka deggan yahay, waxa uu na sugayaa wicintaan ama farriin Idil uga timaadda. Intii uu halkii fadhiyay ayaa waxaa soo gashay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC. Qodobka warka idaacadda ugu horreeyay waxa uu ahaa “Dooni sidday dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga. Dawladda Talyaaniga ayaa sheegtay in 140 qofood oo doonidu sidday 80 ka mid ahi dhinteen. Afhayeen u hadlay ciidanka ilaaladaha xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in wali uu socdo baadigoobka meydadkii dadkii doonidu la tagtay.”
Warsame aad buu uga argagaxay warka dhiillada leh ee BBC-du sheegtay waxa uu na Eebba ka tuugtay in uusan Idil ku darin kuwa dhintay. Warsame halkii ayuu iska sii fadhiyay ilaa i habeenkii sagaalka habeenimo asaga oo idha ku hayay dhammaan wararka idaacadaha iyo website-yada Soomaalidu ka soo tabinayeen doonida Talyaaniga ku tagtay. Ma aysan fududayn in la ogaado magacyada dadka dhintay iyo kuwa badbaaday maadaama aysan jirin warbaahin soomaali ah oo joogta meesha musiibadu ka dhacday. Tan iyo habeenki Warsame ma seexan wax uu sugayay bal Idil soo wacdo ama uu helo war ku saabsan xaalkeeda. Xataa Warsame ma uusan hubin in doonida degtay tahay middii Idil la socotay waxa uu se rumaystay in ay ayadii tahay markii xilligii ay Liibiya ka baxday, waqtigii ay u sheegtay in ay Talyaaniga ku aaddan tahay iyo xilliga la sheegay in doonidu degtay.
Subaxdii dambe markii la gaaray ayaa website-da soomaalida lagu soo daabacay liiska magacyada dadkii ku dhintay doonida Talyaaniga ku degtay. Warsame oo cabsi darteed la jaraynaya ayaa isha la raacay magacyada website-ka. Isla markiiba waxaa ishiisu ku dhacday Idil Xaaji Doolaal.
Warsame markii u xaqiiqsaday in Idil dhimatay aad ayuu u ooyay oohin uusan waligiis ooyin. Kaliya Warsame la ma ooyin geerida gacalisadiisi Idil ee waxa uu dareemay in uu asagu sabab u ahaa geerideeda, waxa uu dareemay in uu yahay dambile. “Haddii aysan Idil i baran lahayn maanta ayada oo faraxsan ayay adduunka joogi lahayd,” Ayuu Warsame ku calaacalay. Waxaa mar walba Warsame ka hormuuqda muuqii quruxda badnaa ee Idil, waxaa u muuqda qosolkeeda wacnaa ee marka uu arko qalbigu ku raaxaysan jiray.
Waxaa Warsame hummaaggu u sawirayaa daqiiqdihii ugu dambeeyay noloshii Idil markii ay biyaha badwaynta ku dhacday ee ay gacanta kor u taagaysay ayada oo rajaynaysa in ruux badbaadiya Alle u bixiyo.
Maalmo badan geeridii Idil kadib Warsame waxa uu ahaa qof waalan oo kale ma na uusan ogayn halka uu joogo iyo waxa uu samaynayo. Waxa uu qaadayay heestii Idil ee fannaankii Maxamad Jaamac Joof…
Axdigeenni maan illaawine
Aaskaagaan moog ag taagnaa,
Ooyoo ilmadaydu idlaato
Rabbi wuu inna kale ilaalshee
Idiley ifkii baan ku oodnahay
Aakhiraa, aan kuugu imaaneey.
Ajashaadi baa idlaatoo
Amarka Allaa lahaaye,
Rabbi wuu inna kale ilaalshee,
Idiley ifkii baan ku oodnahay,
Indhihii ku eegayn jiray baa
Iilkaaga ubax ka baxay baa
Ifka iiga soo udgaaye,
Geeridii Idil kadib Warsame waxa uu noqday sidii ruux nolosha ka quustay oo kale. Bilooyin ayuu cariishkii uu Dhoobley ka degganaa iska dhexyuuraray ilaaa markii dambe uu kiradii qolkavska bixin waayay dabadeed qoyskii qolka lahaa shanddadiisi ay bannaanka u dhigeen maadaama uu lacagtii kirada ahayd bixin waayay.